Feyruska corona awgiis - CSN
Feyruska corona awgiis
Warbixin xiriir la leh fayruuska loo yaqaanno [coronavirus]
Sidii aad u qaadan jirtay taageero-dhaqaaleed waxbarashada (studiestöd)ee Hay’adda arrimaha waxbarashada (CSN) ku siin jirtay, ayaa u qaadan doontaa xitaa haddii iskuulka u xiran yahay, ama waxbarashada aad ka sii wado adigoo gurigaaga ku sugan, taasoo u sabab ah fayruuska Corona. waxbarashada , waa haddii dhaqaalahaaga u sameeyn ku yeesho taasoo dhibaatada dib u bixinta lacagaha keeni karto. Lacagtii (Dakhliga aan saamayn ku yeelanayn qaadashada Deqda/deynta waxbarashada (Studiemedel) (fribelopp) waa laga jaray Deqda/deynta waxbarashada (Studiemedel) ilaa 30 juunyo 2021. Waxaa kaloo la go`aamiyay nidaamyo xiriir la leh nidaam-dhaqaaleed, kuwaasoo loogu talagalay dadyowga dib u bixiya daymaha waxbarashada, waa haddii arrintaan ay saamayn ku yeelanayso dhaqaalaha, taasoo qofku u suuragelinayn in uu imminka dib u bixiyo lacagaha lagu leeyahay.
Sidii aad u qaadan jirtay taageero-dhaqaaleed waxbarashada (Studiestöd), ayaa u qaadan doontaa xitaa haddii iskuulka u xiran yahay, ama waxbarashada aad ka sii wado adigoo gurigaaga ku sugan
Haddii aad xannuunsato ama u baahan tahay in ubad ka xannuunsan guriga ku daryeesho
Haddii aad ku jirtay xaalad karantiil/faquuq – haddii adiga lagu qaadsiiyo jirro guud ahaan halis ah
Haddii natiijada waxbarashada ay saamayn ku yeelan doonto
Haddii aad dakhli leedahay - dakhliga aan saamayn ku yeelanayn qaadashada Deqda/deynta waxbarashada (studiemedel) (fribelopp) waa la ciribtiri doonaa bisha juunyo 2021
Haddii bilaabida waxbarashada dib loo dhigo
Dhibaatada dib u bixinta daymaha waxbarashada
Haddii aad shisheeye tahay oo adiga ama qof qoyska ka tirsan u noqdo shaqolaawe
Haddii dhibaato dhaqaaleed kala kulanto dib u bixinta daynta waxbarashada (studielån)
Haddii lagugu leeyahay Deynta qalabaynta guryaha (hemutrustningslån) oona dhibaato ka haysato dib bixinteeda
Haddii iskuulkaaga u xiran yahay, ama waxbarashada aad ka sii wado adigoo gurigaaga ku sugan taasoo u sabab ah fayruuska Corona, sidii aad u qaadan jirtay taageero-dhaqaaqeed, ee Hay’adda arrimaha waxbarashada (CSN) ku siin jirtay, ayaa u qaadan doontaa. Iskuullada badidooda waxay ardayda siiyaan fursad ay waxbarashada ku sii wataan iyagoo guryahooda ku sugan. Laakin haddii fursaddaas ardayda aan la siinin, ama haddii la siiyo fursadda waxbarashada ee nus wakhti ah, waad iska haysan kartaa taageero-dhaqaaleed iyo deynta berri hore la go’aamiyay.
Haddii waxbarashada aad sii wadan karin, taasoo u sabab ah xannuun ama u baahan tahay in ubad ka xannuunsan guriga ku daryeesho waxaa muhim ah in wargelin laga helo. Xaaladdaas waad haysan kartaa taageero-dhaqaaleed iyo deynta xilliga aad xannuunsan tahay. Waxaan kaloo tixgelin karnaa in adiga ama ubadkaaga oo xannuunsana markii tusaale la qiimayn doono natiijada waxbarashada.
Sidatan ayaa wargelinta xannuunka ugu dhaqaaqi kartaa
Haddii aad arday tahay oona qaadato Deqda/deynta waxbarashada (Studiemedel) ama taageero-dhaqaaleed bilaabida waxbarashada (studiestartsstöd) kuna nooshahay dalka Iswiidan, waxaad xannuunka wargelin kartaa Khasnadda caymiska bulshada (Försäkringskassan). Haddiise dal dibadda ku yaallo aad wax ku barato waa inaad xannuunka wargelisaa (CSN).
Haddii aad da`yar tahay oona dugsi sare ku yaallo dalka Iswiidan wax ku barato oona darteed qaadato (studiehjälp), waa inaad xannuunka wargelisa maamulka dugsiga. Haddiise dal dibadda ku yaallo aad wax ku barato waa inaad xannuunka wargelisaa (CSN).
Markii aad xannuunsan tahay waa inaad wargelisa Khasnadda caymiska bulshada (Försäkringskassan) (ku qoran af-iswiidish)
Markii aad xannuunsan tahay waa inaad wargelisa Hay’adda arrimaha waxbarashada [CSN] (ku qoran af-iswiidish)
Aqriso warbixin dheeraad oo ku saabsan nidaamyada xiriirka la leh jirrada oo hirgaleen (ku qoran af-iswiidish)
Markii ubad u ka xannuunsan yahay sidatan ayaa nagu wargelin kartaa
Haddii waxbarashada aadan wadan karin taasoo u sabab ah daryeelista ilmo ka xannuunsan, waa in arrintaas wargelisa Hay’adda arrimaha waxbarashada (CSN). Haddii aan ku oggolanno muddada aad ubadkaaga daryeelayso, waad haysan kartaa taageero-dhaqaaleed iyo deynta Hay’adda arrimaha waxbarashada (CSN) ku siiso. Teeda kale, waxaa dhici karto in aan tixgelinno muddadii daryeelista ubadkaaga markii aan qiimaynaynno natiijada waxbarashada. Faa'iidooyin kale oo badan ayay leedahay wargelinta daryeelista ilmaha xannuunsan.
Daryeelista ilmo xannuunsan waxay tusaale noqon karta
haddii ubadkaaga u xannuunsado· haddii dugsiga xannaanadda, iskuulka ama goobaha wakhtilummiska ee ubadkaaga albaabada loo xiro muddada 25 abriil 2020 – 30 juunyo 2021, taasoo u sabab ah fayruuska Corona
haddii ubadkaaga u hab halis ah u xannuunsana 2020-2021 lagana ilaalin jiray in fayruuska Corona la qaadsiiyo, kuna qasabto in guriga u joogo mar un laga bilaabo 1 luulyo 2020 ilaa 30 juunyo 2021.
haddii ubadkaaga u ku qasban yahay in uu guriga joogo, usan tegin dugsiga xannaanadda ama iskuulka taasoo u sabab ah in cunugga u faafin karo fayruuska Corona
Wargeli daryeelista ilmo xannuunsan Hay’adda arrimaha waxbarashada (CSN) (ku qoran af-iswiidish)
Haddii marna ay ku suurtagalaynin sii wadashada waxbarashada, taasoo u sabab ah go'aanka qof dhakhtar ah, tallaabo ka qaadista waafaqsan Sharciga amniga cudurrada faafa (Smittskyddslagen), waad haysan kartaa taageero-dhaqaaleed iyo deynta Hay’adda arrimaha waxbarashada (CSN). Sida tusaale qof dhakhtar ah u go’aan gaaro in muddo aan lagu oggolayn inaad ka qaybgasho waxbarashada, in lagugu haayo xaalad karantiil/faquuq ama lagu cidleeyo.
La xiriir Khasnadda caymiska bulshada kaddib wargeli in qof dhakhtar ah u go’aan gaaray, kaasoo ah in aan lagu oggolayn inaad waxbarasho ka qayb gasho, iyo inaad doonayso inaad sii haysato taageero-dhaqaaleed waxbarashada (Studiestöd) xilliga aad jirkaaga ku sido fayruuska cudur faafiyeha ah. Waa inaad ku soo lifaaqda warqadda caddaynta ee qof dhakhtar ku siiyay u soo digirta Khasnadda caymiska bulshada, taasoo lagu caddaynayo inaad ku sugan tahay xaalad karantiil/faquuq iwm, oona ku qoran tahay taariikhda muddada u dhakhtarka qoray.
Warbixin dheeraad waxaad ka aqrisan kartaa barta internetka ee Khasnadda caymiska bulshada ku saabsan sida aad khasnadda ku wargelin karto (ku qoran af-iswiidish)
Hay'adda arrimaha caafimaadka dadwaynaha (Folkhälsomyndigheten) waxay go’aan ku gaari kartaa in goob dalka ku taallo oo cayiman la faquuq, sida tusaale degmada aad degan tahay. Xaaladda laguma oggola inaad degmada ka fogaato. Haddii xaalad noocaas ay dhacdo waad haysan kartaa taageero-dhaqaaleed waxbarashada [Studiestöd] haddii adiga waxbarasho ka sii wadanyaso adigoo gurigaaga ku sugan oo keliya, waxbarashada ku sii wataan iyagoo guryahooda ku sugan.
Marka ku xigta ee aad codsan doonto (studiemedel) ama (studiestartsstöd) waxaan kormeeri doona inta dhibcood ee aad ku guulaysatay. Haddii dhibcooyinka aynan dhamaystirnayn, ama qabyo ay yihiin taasoo u sabab cilladii waxbarashada u sabab ahayd faafinta fayruuska loo yaqaanno (coronavirus), xaaladdaas waa la tixgelin doonaa. Laakin waa inaad haysato warqaad aad ku caddaynayso wixii dhacay. Waxay noqon kartaa caddayn u maamulka iskuulka qoray, e-mail u maamulka iskuulka ku soo diray ama masawir aad ka soo qaado shaashada halkaas u maamulka iskuulka kugu wargelinayo xaaladda noocaas ah.
Natiijada waxbarashada(ku qoran af-iswiidish)
Dakhliga aan saamayn ku yeelanayn qaadashada Deqda/deynta waxbarashada (studiemedel) (fribelopp) kummeelgaar ahaan ayaa la ciribtiri doonaa sannadaha 2020 ilaa juunyo 2021. Taasoo macnaheedu ay tahay in dakhligaaga muddadaas usan saamayn ku yeelan doonin heerka taageero-dhaqaaleed iyo deynta lagu siin doono. Sido kale ayay u khuseeysa dakhliga hantida iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi oo ku soo gala 2020 ilaa juunyo 2021.
Ka feker in dakhliga aan saamayn ku yeelanayn qaadashada Deqda/deynta waxbarashada (Studiemedel) (fribelopp) dib loo hirgelin doono laga bilaabo 1 luulyo 2021. Haddii aad shaqayso bisha juunyo kaddib mushahar lagu soo diro dhammaadka bisha luulyo, wuxuu saamayn ku yeelan karaa xaq u yeelashada qaadashada Deqda/deynta waxbarashada (Studiemedel) muddada 1 luulyo – 31 diseembar 2021.
Haddii aad codsatay oona go’aanka lagu wargeliyay Haddii Deqda/deynta waxbarashada (Studiemedel) ama taageero-dhaqaaleed bilaabida waxbarashada (studiestartsstöd) aad codsatay, kaddib maamulka iskuulkaaga u dib u dhigay bilaabida waxbarashada, waad haysan kartaa Deqda/deynta waxbarashada [Studiemedel] ama taageero-dhaqaaleed bilaabida waxbarashada [studiestartsstöd] haddii go’aanka lagu wargeliyay. Taasoo macnaheedu ay tahay in taageero-dhaqaaleed iyo deynta lagu siiyo kaddib taariikhda waxbarashada bilaabato.
Sidatan ayaa u sameeyn kartaa caddaynta maamulka iskuulka (studieförsäkran)
Lacag bixinta waxay suurtagal noqon kartaa kaddib markii Hay’adda arrimaha waxbarashada [CSN] aad u soo dirto caddaynta maamulka iskuulka [studieförsäkran]. Caddaynta maamulka iskuulka [studieförsäkran] waxaad keenaa markii waxbarashada ay ahayd in ay bilaabato. Taasoo nagu wargelin kartid adigoo adeegsada (Mina sidor).
Haddii lagu siiyo foomka kaasoo xitaa maamulka iskuulka ah in u hoosta ka saxiixo
Xaaladaha qaarkood waa inaad noo keenta caddaynta maamulka iskuulka [studieförsäkran] oo ku qoran foom u gaar ah, kaasoo ah in maamulka iskuulka u hoosta ka saxiixo. Haddii goortii waxbarashada aad bilaabi lahayd dib loo dhigo, taasoo u sabab ah fayruuska Corona, xaaladdaas adiga ayaa foomka hoosta ka saxiixi karo.
Foomka ku soo qor in goortii waxbarashada ay bilaaban lahayd dib loo dhigay taasoo u sabab ah fayruuska Corona. Kaddib foomka u soo dir Hay’adda arrimaha waxbarashada (CSN) wadajir gundhigga aad ku caddaynayso in goorta waxbarashada bilaaban lahayd dib loo dhigay. Wuxuu noqon karaa caddayn ama e-mail iskuulka ku soo diray ama masawir aad ka soo qaado shaashada halkaas u maamulka iskuulka kugu wargelinayo xaaladda noocaas ah.
Aqriso warbixin dheeraad oo ku saabsan sida loo soo gudbiyo caddaynta maamulka iskuulka [studieförsäkran] (ku qoran af-iswiidish)
Haddii codsi cusub aad sameeyso Haddii Deqda/deynta waxbarashada (studiemedel) ama taageero-dhaqaaleed bilaabida waxbarashada (studiestartsstöd) codsato kaddib maamulka iskuulka berri hore ku wargeliyay in dib loo dhigay goorti waxbarashada ay bilaaban lahayd, xaaladdaas taageero-dhaqaaleed iyo deynta taariikhda waxbarashada dhab ahaan ay bilaaban doonto.
Dhibaato miyaa ka haysato dib u bixinta daynta waxbarashada? Xaaladdaas khadka taleefanka nalaga soo xiriir sidii arrinta aan xal ugu heli lahayn awgeed.
La xiriir (CSN)
Haddii shaqaale ahaan ama ganacsade ahaan aad dalka Iswiidan ka qaadan jirtay (studiestöd), kaddib shaqolaawe noqoto, xaaladdaas waa inaad (CSN) wargelisa. Isla nidaamkaani wuxuu xitaa khuseeya qofka ka tirsan qoyska qofka dalka Iswiidan ka qaata (studiestöd). Haddii qofka shaqolaawe noqdo u durbadiiba shaqolaawe ahaan iska diiwaan geliyo Xafiiska Shaqada, wuxuu sii wadan karaa qaadashada (studiestöd) ee dalka Iswiidan.
Haddii dakhligaaga u hoos u dhaco waxaad codsan kartaa in hoos loo dhigo heerka lacagta aad bil kasta bixiso. Adigoo adeegsanayo [Mina sidor] ayaa codsan kartaa. Xaaladdaas waa inaad ku soo qorta dakhliga aad u maleenayso in sannadka ku soo geli doono, kaddib CSN xisaabintaas ayay gundhig ka dhigi doontaa markii ay ka arrinsanayso hoos u dhigista. Haddii sannadka gudihiisa u wax iska beddelo dakhligaaga waxaa muhim ah inaad na wargeliso.
Iyadoo u sabab ah xaaladda fayruuska Corona ayaa waxaad kummeelgaar ahaan codsan kartaa in ka yar intii aad berri hore bixin jirtay. Xaaladdaas email noo soo dir, kaddib noo sharax xaalad-dhaqaaleedkaaga.
Haddii kummeelgaar ahaan aad dhibaato dhaqaaleed kala kulanto dib u bixinta daynta waxbarashada (studielån) ee bil kasta. Adigoo adeegsanayo (Mina sidor) ayaa na wargelin kartaa. Haddiise aad ku talo jirto inaad soo horumariso bixinta lacagaha waxaad nalaga soo xiriiri kartaa khadka taleefanka.
Xaaladda fayruuska Corona saamayn myuu ku yeeshay dakhligaaga, taasoo iyadana sababtay dhibaatada dib u bixinta Deynta qalabaynta guryaha (hemutrustningslån)? Xaaladdaas waxaad codsan kartaa in ka yar intii aad bixin jirtay ama waxba aadan bixin muddo hal sano ah (anstånd). Warbixin dheeraad darteed la xiriir Hay’adda arrimaha waxbarashada (CSN).
Warbixin dheeraad oo ku saabsan fayruuska loo yaqaanno (coronavirus) iyo Hay`adda arrimaha waxbarashada (CSN) oo ku qoran af-iswiidish
Warbixin dheeraad oo ku saabsan fayruuska loo yaqaanno (coronavirus) iyo Hay`adda arrimaha waxbarashada (CSN) oo ku qoran af-ingriisi
La xiriir CSN
Warbixin dheeraad oo ku saabsan fayruuska loo yaqaanno (coronavirus) ka aqriso barta internetka 1177.se